Infographics: Social Media Nzuzo | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 26, 2012 Sọnde, Febụwarị 26, 2012 Douglas Karr
Dị nnọọ ka CAN-SPAM gbanwere ụlọ ọrụ ahịa email ruo mgbe ebighi ebi, anyị kwesịrị n'ihi ụfọdụ ụkpụrụ dị oke mkpa iji tinye n'ọrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na ohere ịzụ ahịa ekwentị. Ọ bụ ezie na ejighị m n'aka na ụlọ ọrụ ahụ nọ na a ọnọdụ dị mwute dị ka infographic dị n'okpuru na-ekwusi ike, m ga-agbachitere ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na ọ bụ nwata na-eto eto ma bụrụ oke ọhụụ. Ngwaọrụ na ozi esitebeghị dịka ha dị taa. Ekwenyere m na ndị ahịa nwere ibu ọrụ na-eji ozi a - ọ bụghị ka ndị nledo na ndị ahịa - kama iji mepụta ahụmịhe ahaziri maka ha.
My nnukwu nchegbu bụ ngosi. Dị ka nri chọrọ ka esi bipụta ozi na-edozi ahụ n'ụdị a kapịrị ọnụ, ekwenyere m na anyị chọrọ usoro ngosi nke data nke ụlọ ọrụ mepụtara ma kwenye. Ndị ahịa agaghị anọdụ ala ma gụọ usoro nke nkwekọrịta ọrụ yana atumatu nzuzo. Asusu abughi ihe anaghi ekwe nghọta… mgbe ufodu na ebumnuche. Companieslọ ọrụ na-ere ahịa teknụzụ bụ akwa dị n'etiti onye na-azụ ahịa na onye mgbasa ozi, ọ ga-abụrịrị ọrụ na aza ajụjụ maka otu ha si echedo ma kesaa ozi ahụ.
Social Media na Nzuzo: Mmekọrịta dị n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nke nzuzo abụrụla ihe esemokwu, mana na mmebi nzuzo nzuzo na nso nso a, ntọala nzuzo na-agbanwe agbanwe na mmụba zuru oke na ihe ndị anyị na-ekerịta na mgbasa ozi mgbasa ozi, ugbu a adịla ọhụrụ nlebara anya na isiokwu na-eweta nsogbu. Site na ndị na-azụ ahịa na-echegbukarị onwe ha banyere ichedo nzuzo ha na oge mgbasa ozi mmekọrịta, mmekọrịta mmekọrịta ga-eme ka ihe nzuzo bụrụ ihe kacha mkpa iji mee ka ndị na-azụ ahịa dị ka ndị na-akwado na ndị na-eso ụzọ.
Ọ bụrụ na enwere otu ozi na infographic a, ọ bụ na ndị na-azụ ahịa enweghị ntụpọ etu esi eji data ha. Nke ahụ bụ ebe anyị kwesịrị ilekwasị anya kachasị anya!
Tags: nzuzoụkpụrụnzuzo mgbasa oziiwu mgbasa ozi mmekọrịta
Feb 28, 2012 n’elekere 11:15 nke abali
Ekwenyere m na ndị ahịa nwere ibu ọrụ na-eji ozi a - ọ bụghị ka ndị nledo na ndị ahịa - kama iji mepụta ahụmịhe ahaziri maka ha. (kpochapu akpịrị ya!)
Jul 28, 2012 na 9:17 PM
Ndụ ga-abụ ihe siri ike nye ndị na-emepụta Ahụmịhe Onye Ọrụ na afọ ole na ole sochirinụ.